Catherine Murombedzi Anoremekedzwa neMubairo weAuxillia Chimusoro
Zvita 02, 2010
Mutori wenhau anoshanda neHerald, Catherine Murombedzi, mumwe wevanhu nemasangano vapihwa mibairo ye2010 Auxillia Chimusoro Awards, iyo inopihwa kuvanhu nemasangano anoshanda zvakasimba mukurwisa HIV/AIDS.
Catherine Murombedzi, uyo anonyora zvine chekuita neHIV muchikamu cheHerald chinonzi HIV Walk, mutori wenhau wechikadzi wekutanga kubuda pachena kuti anorarama neHIV.
Achitaura mushure mekuwana mubairo uyu, Cathrine Murombedzi, ati chinhu chakange chisiri nyore kubuda pachena, asi akaita izvi kuitira vanhu vazive mamiriro ake.
Vamwe vawana mibairo yeAuxilia Chimusoro Awards ndevanoti mushakabvu Dr Monica Glenshaw, avo vakashanda kwemakore makumi matatu vachitungamira chipatara cheMurambinda kuManicaland. Dr Glenshaw vawana mubairo we Lynde Francis, uyo wakaparurwa gore rino.
Mutungamiri wechikamu chinoona nezve HIV/AIDS neTB mubazi rezvehutano, Dr Owen Mugurungi, vapihwa mubairo weLeadership Award. Sangano re Africaid rapihwa mubairo we Social Investment Award.
Vachitaura pachiitiko ichi vakamiririra gurukota rezvehutano, Dr Henry Madzorera, munyori mubazi rezvehutano, Dr Gerald Gwinji, vati ivo kunyange hazvo Zimbabwe yakakwanisa kuderedza huwandu hwevanhu vari kubatwa nehutachiona, pachine basa guru rinofanirwa kuitwa. Vatiwo hurumende yakazvipira kuderedza huwandu hwevanhu vari kubatwa neHIV.
Mwana wamushakabvu Auxillia Chimusoro, uye achishanda nesangano reBatanai HIV/AIDS Services, VaFarai Mahaso, vati vari kufadzwa zvikuru nekuona vanhu vachiramba vachisimudzira basa rakatangwa naamai vavo. VaMahaso, avo vanove dangwe mumhuri yevana vatatu, vanoti zvairema mumazuva ekutanga kugamuchira kuti amai vavo vaiva nehutachiona.
Mumiririri weAmerica muZimbabwe, Va Charles Ray, vati nyika yavo yakazvipira kuramba ichishanda neZimbabwe mukurwisa HIV/AIDS.
Mukuru wechikamu mubazi iri chinoona nezveHIV/AIDS neTB, Dr Oweni Mugurungi, vatiwo vanhu vose munyika vanofanirwa kuita muonera pamwe mukurwisa dambudziko iri. Vatendawo vose vavakashanda navo pamwe nevavanoshanda navo nekuwana kwavaita mubairo uyu.
Mubairo weAuxilia Chimusoro Awards unopihwa gore rega rega kuvanhu nemasangano vanenge varatidza kushanda zvakadzama mukurwisa HIV/AIDS muZimbabwe. Muzvare Chimusoro ndivo munhu wekutanga kubuda pachena muZimbabwe muna 1989 kuti vaive neHIV. Muzvare Chimusoro vakaramba vachirwira kodzero dzevanhu vanorarama neHIV kudzamara vafa muna 1998